Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone (6s iPhone Plus mid)
Muhiim !!! 2 Waa Dos ka dib markii fariimaha qoraalka ah ee iPhone
1) Jooji isticmaalka aad iPhone isla markiiba
Marka aad si qalad ah u tirtirto farriimo ku saabsan iPhone, fariimaha qoraalka ah ma dhab ahaantii aad isla markiiba la tirtiro. Halkii, waxay uun ku noqon aan la arki karin oo sugaya in lagu overwritten by xog cusub. Sidaas waa in aad joojiso isticmaalka aad iPhone isla markiiba ka dib marka aad ka heli aad badiyay fariimaha qoraalka ah iPhone. Kasta oo howlgal dheeraad ah oo ku saabsan iPhone ka dhigi doonaa wax aan macquul ahayn in ay dib u soo ceshano fariimaha tirtiray on iPhone.
2) Raadi computer dhaw u iPhone kabashada fariin
Tan iyo markii aad in aan wax samayn kartid aad iPhone, aad u baahan tahay si aad u hesho PC ama Mac ah in ay dib u soo ceshano ee fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone. Ayaa si degdeg ah, si fiican u. Software kaliya socda ee computer ka caawin kartaa inuu ka soo kabsado fariimaha tirtiray ka iPhone. App No waxay hadda sameyn kartaa. Haddii aad aragto mid ka mid ah, xukumi halista ah ee laga badiyay xogta iPhone aad si dhab ah ka hor inta aan la isticmaalayo.
Raadi farriimaha qoraalka ah ee aad iPhone maqan ama la tirtiro fariimaha qoraalka ah ka iPhone si qalad ah? Ka dhig funaanado aad on! Waxaad wax ka qaban karta! Laakiin maskaxda ku hayso, si degdeg ah natiijada ugu fiican waxaad ka heli doonaa. Haddii kale, marnaba ma arki doonaa, kuwaas oo fariimaha qoraalka ah tirtiray mar kale. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) waa iPhone tirtiray qalab kabashada text xirfadle in uu kuu sheegayaa sida aad u heli fariimaha dib tirtiray on iPhone. Waxa aad bixisaa 3 fursadaha inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka aad: kabsado fariimo toos ah oo ka iPhone, Macdan iPhone fariimaha kaga imaanayo Lugood iyo dib u soo ceshano fariimaha qoraalka ah iPhone kaga imaanayo iCloud (macruufka 9 iCloud gurmad file aan la taageeray weli hadda version ayaa taageeray dhaqso u yimaado.).
macruufka 9 / iPhone 6s (Plus) Recovery Message Text
3 siyaabood ee dib u soo ceshano fariimaha qoraalka la tirtiray iyo iMessages ka iPhone
Taageer qalabka kala duwan: Waxa ay taageertaa oo dhan iPhone, iPad iyo iPod taabto, oo ay ku jiraan 6s iPhone (Plus), iPad Pro iyo macruufka 9
3 kabashada hababka: baarista qalab macruufka ah, soo saarida aad hayaan Lugood iyo iCloud.
Save fariimaha sida aad jeceshahay, si toos ah u hesho dib u SMS si aad iPhone sidii hore, ama badbaadin on your computer sidii gurmad ah.
Selective Falanqeynta & kabashada: Guudmar ku fariimaha la helay iyo kabsado wax kasta oo aad rabto.
3 Solutions dib u soo ceshano fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka aad bixisaa 3 hababka soo kabashada dib u soo ceshano qoraalka tirtiray on iPhone. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) on your computer iyo raacaan mid ka mid ah xalka soo socda si ay u bartaan sida loo soo ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone.
1: ka iPhone Ladnaansho SMS
2: Ladnaansho SMS ka Lugood
3: ka iCloud Ladnaansho SMS
Xalka 1: Si toos ah soo kabsado fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone
Tallaabada 1 raadso tirtiray fariimaha ku iPhone
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan iPhone si aad u computer. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo riix Start Scan button muuqday in uu furmo si ay baarista iPhone. Ha barkinta aad iPhone inta ay socoto iskaanka ah.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha qoraalka ah iPhone
Marka scan la dhammeeyo, waxaad dooran kartaa Messages iyo Lifaaq Message in ay ku eegaan oo dhan oo ka mid ah fariimaha qoraalka ah ka helay mid ka mid ah. Markaas eegista soo kabsado waxyaabaha aad u baahan tahay. Marka gujinaya 'Ladnaansho', a pop-up weydiin doonaa in aad ka bogsato in aad qalab ama computer. Haddii aad doorato 'Ladnaansho in Device ", ka dibna soo kabsaday fariimaha qoraalka ah waa la badbaadin doonaa iPhone. Sidoo kale, waxaad sidoo kale waxaan iyaga ku badbaadin kartaa in aad computer. Ka sokow, ka kooban iMessage tirtiray la sidoo kale laga heli karaa, oo ay ku jiraan qoraalka, emoji oo ku lifaaqan.
Xalka 2: Ladnaansho tirtiray iPhone Messages via kaabta Lugood
Tallaabada 1 Scan Macdan aad gurmad Lugood
Dooro habka soo kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File hore. Dooranaysaa gurmad aad rabto in aad soo kabsado fariimaha qoraalka ah ee ka soo liiska, oo guji Start Scan button Macdan ka kooban gurmad. Dhammaan files gurmad jira on your computer ayaa diyaar u ah soo saarista.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo dib u soo ceshano fariimaha u iPhone
Skaanka aad qaadataa oo keliya dhowr ilbiriqsi. Waxaa ka dib, waxaad ku eegaan karo oo ka soo kabsado jiraan farriimo ee menu ee Messages iyo Lifaaq Message . Marka click 'Ladnaansho', waxaa lagu weydiin doonaa in aad ka bogsato in aad qalab ama computer. Haddii aad aad iPhone xiran computer via cable USB aad, ka dibna aad dooranayso 'Ladnaansho in Device "badbaadin doonaa fariimo ah in aad iPhone. Haddii aan, ka dibna fariimaha qoraalka ah ee la badbaadin doonaa si aad u computer.
Xalka 3: Soo Celinta tirtiray iPhone Messages via kaabta iCloud
Tallaabada 1 Download iyo Macdan aad gurmad iCloud
Markaas gasho in aad xisaabta iCloud. Ka dib markii in, dooran file gurmad aad rabto in aad u soo dejisan ah. In ka pop-up cusub, hubi 'fariin' iyo 'ku lifaaqan fariin' si ay u soo bixi. Marka aan sidaa yeelno, waxa soo bixi kaliya fariimaha qoraalka ah oo ku lifaaqan ah, badbaadinta aad mar.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha iPhone
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karaan dhamaan fariimaha qoraalka ah ee gurmad iCloud faylka. Dooro fariimaha qoraalka ah waxaad u baahan tahay oo guji 'Ladnaansho'. Labada 'Ladnaansho in Device' iyo 'Ladnaansho in Computer' ayaa laga heli karaa. Waxaan kuu soo jeedinaynaa in aad iPhone xirmaan your computer dhex cable USB ah iyo doortaan 'Ladnaansho in Device ". Waa sahlan si aad u aragto fariimaha ku qoran iPhone ka badan on your computer.
iPad Pro, oo dhan versions iPad Air, oo dhan versions mini iPad, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2, iPad 1
Content Text, Xiriirada , Messages, wac taariikhda , Calendar , Notes, waano, WahtsApp History, farriimaha Facebook, Safari bookmark , Documents App
Talooyin ku saabsan iPhone Group fariimaha
Sidee si ay awood / gab Group Fariin ku iPhone
Fariin Group on iPhone waxaa guud ahaan soo diray iMessage haddii qaata oo dhan u oggolaatay iMessage ah. Haddii aan, wada hadal koox waxaa loo diri doonaa sida MMS, xataa marka content waa qoraalka oo kaliya. Waa mid aad u fudud in ay awood ama gab Group Fariin ku iPhone.
Just tagaan si ay Settings> Messages> tuubada in On / off Group fariimaha . Waxaad gab karaa Group Fariin ku Settings> Messages.
Sidee inuu ka tago chat kooxda on iPhone ah
Haddii aadan rabin in la dhibayay farriimaha group aan waxtar lahayn, oo aad u fudud tegi karo fariin koox aad iPhone. Dhig sida soo socota.
1. Tag "Settings", ka dibna waxay doortaa "Messages".
2. Waxaad ka arki kartaa "Group fariimaha" hoos "SMS / MMS" Kooxda waxaa. Dami ee "Group fariimaha".
3. Delete fariin koox ka mid ah oo aad hore u ahayd qayb ka mid ah ay furitaanka codsiga Messages aad iPhone. Tubada wadahadalka mar ka dibna "Edit" icon ee dhinaca kore ee midig ee shaashada.
4. Tubada "Clear oo dhan" badhanka ee geeska bidix ee kore ee shaashada ka dibna "Sheekeysiga Clear" daaqada pop-up in ay tirtirto fariinta kooxda oo dhan. Tallaabadan waa mid joogto ah oo ninna ma beddeli karo.
Hot Articles ee macruufka 9 Casriyaynta aad jeceshahay inaad
macruufka 9 Data Recovery: Ladnaansho macruufka u Khasaaray 9 Data
Update macruufka 9 on iPhone / iPad / iPod taabashada
IPhone kaabta ka hor macruufka 9 Hagaaji
macruufka 9 Hagaaji White Apple Logo
Dardar Your iPhone in Orod macruufka 9 dhakhso
Bedelka Old iPhone si iPhone 6s (Plus)
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa iPhone